BAAFIN: Xaggee ku dambeeyeen Guddigii Kahortagida Corone-Virus ee Puntland, Xili 5 Qof la karantiilay, Dadkii ay la kulmeen-na Suuqyada joogaan.
GAROOWE(P-TIMES) – Maalmihii uu bilowday halista cudurka Corone-Virus ee gudaha Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ka mid noqday madaxdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed, kana jawaabta qeylo-dhaanta cudurkan, waxaana uu magacabay guddiga kahortagida iyo Wacyigalinta bulshada ee Corone-Virus, laakiin Guddigaas is weydiimo badan ayaal dul-hoganaya ilaa maanta.
Laakiin, magacaabidii guddigan Madaxweyne Deni laftirkiisa oo lahaa dabagalka ayaa safar dalxiis & Nasasho ah u aaday xeebaha gobalka Nugaal, taas oo u muuqanaysa in aysan bulshada wacyigalintooda iyo arrimaha ku xeeran xanuunkan aad u dhibeynin madaxda.
Guddigan waxaa Gudoomiye u ah Wasiirka Caafimaadka Puntland oo hadda safar shaqo ugu maqan magaalada Muqdisho, ka dib kaqeybgalkii kulankii wasaaradda Caafimaadka Heer federaal iyo soo dhiibidii saamigii Puntland ee gargaarkii laga helay Maalqabeenka Shiinaha u dhashay.
Guddiga waxaa xubno ka ah, Wasiiradda Kalluumeysiga, Kheyraad Badda, Dekedaha, Ganacsiga, Wasiiru dowlaha Warfaafinta iyo Gudoomiye-nimada oo uu leeyahay wasiirka Caafimaadka, waxayna ilaa xiligaas uun booqdeen xarunta Bad-qabka oo laga hirgaliyey duleedka magaalada Garoowe, 22kii bishan.
Kiisas cusub oo looga shakisan yahay cudurka Corone Virus oo gaaraya 5 qof ayaa ilaa hadda lakarantiilay, waxayna ku jireen xarunta magaalada Garoowe, dhammaan dadkani waa kuwa iska shakiyey iyagu oo aan cidna soo qaban, haddii ay lakulmeen ee ay sheegeen in ay shakiga ka qabaan xataa qof kamid ah lama soo qaban oo lama karantiilin.
Xaduudaha Puntland oo shalay la amray in la xiro waa kuwa furan ilaa hadda inkastoo waqtiga dhaqangalku uu yahay mid waqti ka dhiman yahay, haddana ma jiraan gabi ahaanba wax wacyigalin ah oo ay guddigan wadaan.
Xariiro aan la sameynay guddigan iyo Wasaaradda Caafimaadka Puntland, waxaan ogaanay in aysan jirin isku duba rid dhameystiran iyo welwel lagaba qabo xanuunkan, balse ay wax kasta si fudud ka dhiganayaan guddigan iyo bulshada Puntland.
Dawladdaha waa weyn ayaa xanuunkan uu ka dhigay kuwa howlgab-noqday oo u baahan gargaar deg deg ah, dadka Soomaaliyeed oo aan haysan nidaam caafimaad oo rasmi ah walaac weyn ayaa laga qabaa haddii uu faafo.
Ilaa hadda 3 kiis ayaa lagu cadeeyey magaalada Muqdisho, Somaliland-na guddigooda oo shaqo wanaagsan haya waxay gacanta ku hayaan ku dhawaad 50 qof oo la karantiilay, qaarkood magaalada Burco ayaa laga qaaday si loo geeyo xarumaha Hargeysa oo lagu hayo.
Jawaabaha dadkan ayaa la sugayaa dhammaantood dhanka Somaliland, marka laga reebo Muqdisho oo ay cad yihiin sadexda kiis ee laga helay, lana filayo in ay bogsadaan Haddii Alle idmo, waxaana dadka Soomaaliyeed loo dirayaa fariimo ku wajahan Wacyigalin.
Warbaahinta ayaa ka jiifta xanuunkan & Halistiisa, waxayna dad badan ku baraarugsaneyn halista ka dhalan karta, haddii uu ku faafo Soomaaliya oo aan laheyn adeeg caafimaad, sidaas oo kale dadka Soomaalidu ay yihiin kuwa qarsada xanuunka, sida Gaalkacyo oo wali laga baadi-goobayo dad looga shakiyey.
somali iyaga ayaa is xasdaya.covid19 ceeb miya?gudiga puntland magacowdayna weli way iska hurdaan.illaa hadda ma arag wax wacyigalinaya bulshada.